Inkcazo yeProjekthi yeHuzhou Shuanghong
Izinto zokwenza imveliso zenziwe nzima. Izixhobo ezine zerhasi, umganyana wamadaka, isamente nodongwe zixutywe ukwenza izitena. Bondliwa ngokwahlukeneyo ngokusebenzisa iibhokisi ezine zeebhokisi, kwaye batyunyuzwa ngokuxhamla ngaxeshanye. Emva koko bahlolwa ngokuqengqeleka kabini ...
Inkcazo yeProjekthi yeCixi Longteng
Le projekthi yezitena yodongwe isebenzise inkqubo yobunjineli yokwenza izitena ngezinto ezimbini eziphambili nezincedisayo. Izinto eziphambili ziyilitye, elikhuhliweyo ngabaqengqeleki abatyunyuziweyo emva kokususwa kwelitye, kwaye izinto ezincedisayo yinkcitho yokwakha, ethi isuswe ...